Ugu yaraan 60 qof oo ku dhimatay duqayn loo adeegsaday kiimiko oo ka dhacday waqooyiga-bari ee dalka Suuriya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldUgu yaraan 60 qof oo ku dhimatay duqayn loo adeegsaday kiimiko oo ka dhacday waqooyiga-bari ee dalka Suuriya
April 4, 2017 Puntland Mirror World 0
Ugu yaraan 60 qof oo ku dhimatay duqayn loo adeegsaday kiimiko oo ka dhacday waqooyiga-bari ee dalka Suuriya. [Xigashada Sawirka: Anadolu]
Dimishiq-(Puntland Mirro) Ugu yaraan 60 qof ayaa lagu dilay tobonaan kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar looga shaki qabo duqayn kiimiko oo ka dhacday gudaha waqooyiga-bari ee dalka Suuriya, sida ay sheegeen kooxda dabagalka Suuriya.
Kooxda dabagalka Xuquuqul Insaanka ee Suuriya ayaa ku warantay in duqaynta lala eegtay magaalada Khan Sheikhoun ayna qaadeen diyaaradaha dowladda Suuriya ama kuwa Ruushka.
Ilo-wareedyo milatariga Suuriya katirsan ayaa qaadacay in dowladdu ay adeegsatay wax hub kiimiko ah sida kan oo kale.
Dhanka kale, Wasaaradda Difaaca Ruushka ayaa ku adkaysatay in wax duqayn ah ay ka geysteen deegaankaas.
Ilo-wareedyo madax-banaan ayaa sheegay in diyaaradaha duqaynta geystay ay tureen madaafiic laga sameeyay maadada Kaloorokuwiinta.
November 20, 2016 Ugu yaraan 60 qof oo ku dhimatay tareen ku qalibmay waqooyiga Hindiya
June 20, 2016 Tirada qaxootiyaasha caalamka oo meel sare gaartay markii ugu horeysay, sida ay sheegtay QM
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland Security Forces (PSF) destroyed a key Al-Shabab command and supply in Galgala Mountains, PSF said in their Facebook page. In the raid, PSF killed at least 18 Al-Shabab extremists and three others [...]
Puntland oo ciidamo u dirtay gobolka Sool, iyo dagaal culus oo dhici kara wakhti kasta
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa ciidamadeeda qalabka sida geynaysa gobolka Sool, taasoo muujineysa dagaal culus in uu qarxi karo oo u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland wakhti walba, sida ay sheegeen ilo-wareedyo ciidamada katirsan. Ilo-wareedyo ciidamada Puntland [...]